राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतम गएसँगै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र नयाँ अर्थमन्त्रीको चर्चा चुलियो
को बन्ला नयाँ अर्थमन्त्री: गौतम कि पौडेल ! यस्तो छ तयारी
प्रकासित मिति : २०७७ भाद्र १९, शुक्रबार प्रकासित समय : २०:३७
काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपाको सचिवालयको बिहीवार राष्ट्रिय सभामा नेता वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र नयाँ अर्थमन्त्रीको चर्चा चुलिएको छ।
गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णयसँगै अर्थमन्त्रीमा युवराज खतिवडाको निरन्तरताको सम्भावना अन्त्य भएको छ। खतिवडाले शुक्रवार पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
सरकारले शुक्रवार नै नेकपा सचिवालयको निर्णयानुरूप गौतमको नाम राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने चर्चा चलेको थियो। तर अपराह्ण बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यससम्बन्धी कुनै निर्णय नगरेको विवरणहरू आएका छन्।
यसअघि नेकपाभित्र देखिएको समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले सङ्घीय र प्रदेशको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सिफारिस गरेको थियो। नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका भनाइमा बिहीवार भएको सचिवालय बैठकमा उक्त प्रतिवेदनबारे ुसमग्रमा छलफल भयो।
तर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे बुझ्न नपाएको उनको जबाफ थियो। कार्यदलको प्रतिवेदनमा सचिवालयका सदस्यहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमतिका साथै निश्चित मापदण्डको आधारमा त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने उल्लेख छ।
उक्त प्रसङ्ग उठाउँदा पौडेलले भने, अनिवार्य भन्ने त के कुरा भयो, संवैधानिक रूपमा उहाँको अधिकारको कुरा हो। परामर्श त उहाँले गरिहाल्नुहुन्छ नि। पहिला पनि परामर्श गर्नुभएकै हो।
महामारीले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कटको बेला आउन सक्ने जोखिमबाट मुलुकलाई पार लगाउन अर्थमन्त्रीको भूमिका प्रमुख हुने भएकाले धेरैलाई खतिवडाको उत्तराधिकारीप्रति चासो रहेको देखिन्छ।
आफ्नो निम्ति राष्ट्रिय सभाको ढोका खुलेपछि नेता गौतमले पनि सरकारमा सहभागी हुने इच्छा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। कतिपयले पौडेल पनि अर्थमन्त्री बन्न सक्ने आकलन गरेका छन्। उनले पहिला पनि अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका थिए।
अर्थतन्त्रबारे राम्रो दखल राख्ने विज्ञ नेता पार्टीभित्र नदेखिएको बताउने प्रधानमन्त्री निकटस्थ व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्रत्याशित निर्णय नगरेमा भूतपूर्व अर्थमन्त्रीहरूमध्ये एक जनालाई रोजिने सम्भावना औँल्याउने गरेका छन्।
त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा पर्न सक्ने उनीहरू ठान्छन्।प्रचण्ड निकटस्थ नेताहरूले पनि नेता गौतम वा पौडेल नै खतिवडाको उत्तराधिकारी बन्ने सम्भावना बढी रहेको औँल्याएका छन्।
तर महासचिव पौडेलले सङ्क्षिप्तमा भने, मलाई पार्टीकै कामको बोझ छ, यति नै पर्याप्त छ। मलाई यही जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगिरहेको छ। त्यसो भए तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्न त ? भन्ने प्रश्नमा उनले अनिच्छा शब्द प्रयोग नगरी त्यही जबाफ दोहोर्‍याए।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री खतिवडालाई निरन्तरता दिन चाहेकाले नै करिब छ महिनासम्म पनि नेता गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय लागु भएको थिएन।
यस पटक पनि उनी खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभा पठाउन चाहन्छन् भन्ने देखिएको थियो। तर पार्टीको आन्तरिक राजनीतिका कारण त्यसो गर्न सम्भव भएन।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले यसै साता भनेका थिए, राजस्वमाराहरू एकदम क्रुद्ध र आक्रोशित रूपमा उहाँविरूद्ध लागिपरेका छन्।
नेकपा स्थायी समितिका एक सदस्यले पार्टीभित्र सहमतिको वातावरण बनेका बेला खतिवडाका कारण फेरि बिथोलिने देखिएपछि वामदेव गौतमलाई अघि सारिएको बताए।
राष्ट्रिय सभामा युवराज खतिवडाको पदावधि सकिएपछि रिक्त स्थानमा कसलाई मनोनयन गर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी थियो
। बाहिर व्यापारी व्यवसायीहरूको पनि अर्थमन्त्रीका कारण हामीलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो भन्ने ठूलो आवाज छ, जनमत पनि नकारात्मक बनेको देखिन्छ, ती नेताको भनाइ छ।
उनले भने, उहाँलाई बिदा गर्नुपर्छ र राख्नैपर्छ भन्नेमा पार्टीभित्र फेरि द्वन्द्व हुने देखिएपछि त्यसको सहज हल गर्न वामदेवजीलाई अचुक अस्त्रको रूपमा साथीहरूले अघि सारेको पक्का हो। किनकि उहाँ अघि सरेपछि अरू टिक्ने कुरा थिएन।
प्रधानमन्त्रीको भित्री रोजाइमा रहेका खतिवडाको बहिर्गमनको निम्ति गौतमभन्दा अर्को पात्र नदेखिएको ती नेताले बताए।तर खतिवडाको बहिर्गमनपछि गौतमले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना कमजोर रहेको प्रधानमन्त्रीपक्षीय नेताहरूको बुझाइ पाइन्छ।
सरकारमा रहेका शीर्ष नेताहरू नै फेरिने वा पूरै नयाँ टीम पठाउने निर्णय भएमा भने अनुमान र चर्चाभन्दा अवस्था फरक हुनसक्ने सम्भावना रहेको नेकपा नेताहरू बताउँछन्। बीबीसीबाट
विभिन्न अवैध लागूऔषध सहित १ पक्राउ
धनुषा । धनुषामा विभिन्न अवैध लागूऔषध सहित एक व्यक्ति सोमबार विहान पक्राउ परेका छन्
कोरोना संक्रमणः थप ३७ सय बढीमा सङ्क्रमण, १८ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । नेपालमा विगत २४ घण्टामा ३,७९० जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी स्वास्थ्य
कूल एक लाख ३६ हजार नाघ्यो, निको हुने २३३५ जना
Reply on Twitter 1318158884142395392Retweet on Twitter 1318158884142395392Like on Twitter 1318158884142395392Twitter 1318158884142395392
सांसद बस्नेतले दशैंभत्ताको रकम भक्तपुर अस्पताललाई दिए
गरीब असहायलाई सहयोग गर्नुपर्ने जोड
Reply on Twitter 1318147426675404800Retweet on Twitter 1318147426675404800Like on Twitter 1318147426675404800Twitter 1318147426675404800
छुट्टाछुट्टै ठाउँबाट जबरजस्ती करणी अभियोगमा ३ पक्राउ
घटनाबारे अनुसन्धान हुँदै
Reply on Twitter 1318139736406454272Retweet on Twitter 1318139736406454272Like on Twitter 1318139736406454272Twitter 1318139736406454272
घटनाबारे अनुसन्धान हुँदै http://harpalnepal.com/2020/10/52285/
Reply on Twitter 1318139452426842113Retweet on Twitter 1318139452426842113Like on Twitter 1318139452426842113Twitter 1318139452426842113
बुढानिलकण्ठबाट तास खेलिरहेका पाँच पक्राउ
प्रहरी अनुसन्धान जारी
Reply on Twitter 1318130860780965888Retweet on Twitter 1318130860780965888Like on Twitter 1318130860780965888Twitter 1318130860780965888